Degaanka Qeydaro oo markii ugu horreeysay laga hirgeliyay Cuspitaal – Radio Muqdisho
Degaanka Qeydaro oo markii ugu horreeysay laga hirgeliyay Cuspitaal
Degaanka Qeydaro oo ka mid ah Tuulooyinka hoos taga Dagmada Cadaado ee Gobalka Galguduud , ayaa markii ugu horreysay laga hirgeliyay Cuspitaal dabooli doono baahiyaha caafimaad ee halkaasi ka taagnaa.
Dhismaha Cuspitaalka Tuulada Qaydaro ayaa waxaa is kaashaday Bulshada halkaasi ku dhaqan iyo xubno ka tirsan tirsan Golaha Barlamaanka fadaraalka Soomaaliya.
Munaasabaddii Xarig jarka xaruntan Caafimaad ayaa waxaa ka qeyb galay xildhibaanno ka tirsan Labada Aqal ee Baarlaamka fadaraalka Soomaaliya, masuuliyiin ka socotay Labada gole ee maamul Goboleedka Galmudug, Guddoomiyaha Degmada Cadaado iyo wax garadka Tuulada Qaydaro.
Maxamed Salaad Cilmi, oo ku hadlayay Magaca Dadkii Gacanta ka geysatay taaba gelita Cusbitaalkan ayaa sheegay in uu yahay mid ku dhismay isku tashi Bulsho iyo is xilqaan.
Gudoomiyaha Dagmada Cadaado, C/laahi C/raxmaan Xuseen, oo isna ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in dhismaha Cusbitaalka guud ee Qeydaro uu noqan doono mid wax weyn ka tara baahiyaha caafimaadka ee ka jira degaanka.
Wasiirka Caafimaadka Galmudug, Naciimo Maxamed Catoosh ayaa iyana xustay in wasaaradda Caafimaadka Galmudug ay markasta si joogta ah uga warqabi doonto baahiyada ka jira Cuspitalka Qaydaro.
Xildhibaanad; Duniyo Maxamed Cali, oo soo xirtay munaasabadda ayaa sheegtay in ay si buuxda u garab taagan yihiin ka Baarlaman ahaan Dadka degaanka ee isku tashiga sameeyay, waxanay si rasmi ah ugu wareejisay maamulka Cusbitalka Qaydaro Wasaaradda Caafimaadka Galmudug.
R/wasaare Kheyre oo dib ugu soo laabtay Magaalada Garoowe
Kacaanka Iiraan: Dadka reer Iiraan nooma ogola in aan la xajoona “Shaydaanka weyn”
Kacaanka Iiraan: Dadka reer Iiraan nooma ogola in aan la xajoona "Shaydaanka weyn"